Potato Peeler(အခွံနွှာစက်) အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
အာလူးနဲ. တခြား အသီးအရွက်များ၊ သစ်သီးများကို
အခွံနွှာဖို. အခွံနွှာစက်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။
အခွံများကို အလွယ်တကူ ခွာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – 4000 kyatts
အမည်: Potato Peeler(အခွံနွှာစက်)